CrankWheel: Jadwalka Jadwalka iyo Soo Degsashada Iyadoo La Joojinayo Demo Degdeg Ku-saleysan Browser | Martech Zone
Is dhexgal kasta oo looga baahan yahay inta udhaxeysa rajada oo ujeedkeedu yahay sameynta wax iibsi iyo awooda kooxdaada iibka ee ka caawineysa inay badalaan waxay u badan tahay inay yareyneyso fursadaha badalashada. Taas waxaa ku jira waqti looga jawaabo, tirada qasabadaha, tirada shaashadaha, tirada foomka… wax walba.
Xirfadleyda iibka ee aan ogahay kaliya waxay rabaan inay ka hor galaan rajada. Waxay ogyihiin mar inay lahadlaan rajada, inay aqoonsadaan dhibaatadooda, oo ay ku dhex socdaan xalka are waxay u badan tahay inay u beddelaan macmiil.
Shirkado badan ayaa khibradaas ka dhiga mid cabsi badan, in kastoo. Waxaan ka yeelnaa inay buuxiyaan foomamka u qalmitaanka hore, waxaan ka yeelnaa inay codsadaan macluumaad, annaga ayaa jadwal u sameysanno ballamo u gaar ah… ka dibna waxaan la yaabnay in awoodda aan u leennahay inaan helno hoggaan tayo leh oo waaxda iibkeenna ay leedahay heer beddelaad xun.
CrankWheel Demos Instant
Kawaran haddii, hal goob keliya, aad isla markiiba u marin kartid codsi rajada xubinta kooxda iibka furan? Waxaad si fudud u codsaneysaa lambarka taleefankooda, xubinta kooxda iibka ayaa ku mashquulsan iyaga without iyagoon wax soo degsasho ah softiweer ah ama talaabooyin dheeri ah… ay bilaabi karaan inay muujiyaan alaabtaada ama adeeggaaga?
CrankWheel Demos Instant xalkaas ayaa ah. Hogaamiyaasha iibka adduunka oo dhan waxay adeegsadaan CrankWheel si ay isla markiiba ula wadaagaan shaashadooda filashooyinka - looma baahna soo dejin. Adiga oo adeegsanaya Kordhinta Chrome, kooxdaada iibka ah waxay ku tusi karaan rajadaada shaashadda midkood mobilka gacanta ama desktop-ka wax ka yar 10 ilbidhiqsi.
Intaas oo kaliya maahan, maxaa yeelay waxay wadaagayaan lambarka taleefankooda rank CrankWheel sidoo kale waxay isku dayeysaa inay aqoonsato soona celiso xogta muhiimka ah ee ku saabsan rajada si aad madax ugu noqoto bilowga fahamka cidda ay yihiin, shirkadooda, iyo inay u badan tahay iyo haddii kale uqalmid hogaan.
Inta lagu jiro kulamadeyda maalinlaha ah ee rajada, waxaan u adeegsadaa CrankWheel inaan ku soo bandhigo adeeggayaga shabakadda. Runtii way iga caawinaysaa inaan si dhakhso leh u muujiyo astaamaha aniga oo aan ku rakibin wax barnaamij ah kombiyuutarka rajada.
Quentin Roquet, oo ah agaasimaha guud ee Progenda
Astaamaha CrankWheel iyo Faa'iidooyinka
Isticmaalayaasha CrankWheel way arkayaan kordhinta 22x ee tirada demo waxay awoodaan inay bilaabaan mahadsanid Demos Instant.
Qabashada hogaaminta wada hadalka - Hesho tilmaamo intaa ka badan adigoo u mahadcelinaya foomamka wada hadalka ee sida buuxda loo qaabeyn karo ee aad ku ridi karto boggaaga ama ololeyaasha emaylka. Markiiba ogeysii ogeysiisyada iibka ee ku saabsan rajada internetka ee sugitaanka wicitaan, shaashadda, iyo fariin qoraal ah.
Kobcinta macdanta "lead" - U adeegso si ficil ah macluumaadka xiriirka yar adigoo ku kobcinaya macluumaadka ku habboon sida goobta, shirkadda, xiriiriyeyaasha bulshada iwm Abuur diiwaanno CRM oo buuxa oo wax badan ka ogow hoggaankaaga.
Integration - Ka jawaab hogaamiyaasha degelku soo saaray isla markiiba iyadoon loo baahnayn inay dhexgalaan barnaamijyado awood u leh iibinta. Si fudud ugu dar a Ii wac hadda or Codso Demo a badhanka boggaaga. Tilmaamaha ayaa si toos ah ugu qulqulaya CRM-gaaga ama nidaamyada kale adoo adeegsanaya mid ka mid ah isku-dhafnaanta badan ee la heli karo.
Abuur Bilaash CrankWheel Xisaab Demo Degdeg ah
Socod Ku Dhex Maraya CrankWheel Demos Instant
Waa kuwan muuqaalka muuqaalka guud ee xalka labada khibradood ee adeegsadaha rajada iyo khibradda kooxda iibka. Waa qurux jilicsan!
Shaacinta: Anigu waxaan ku xidhan ahay CrankWcag.
Tags: hadda wackordhinta chromecrankwheeldemo deg deg ah crankwheelCRMchrome googledeg deg ahxoojinta leedhkacodso demoxogta iibkashaashadda